Satroka pom-pom mora handravaka | Asa tanana
Satroka pompom mora handravaka
Manao ahoana daholo! Amin'ny asa tanana ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba hanaovana izany satroka amin`ny pompom handravaka kahie, boaty, fanomezana, karatra na izay rehetra azontsika eritreretina fa tiantsika ny hanome rivotra ririnina.
Te hahafantatra ny fomba fanaovana an'io asa tanana tsotra io ve ianao?
1 Ny fitaovana izay ilaintsika hanaovana ny satroka pom-pom-tsika
Ny fitaovana izay ilaintsika hanaovana ny satroka pom-pom-tsika
Volon'ny loko izay tiantsika
Fork hanaovana ny pom-pom
Baoritra na foam, dia hifidy loko mifanaraka amin`ny volon`ondry pompom
Lakaoly mafana na silôly
Ny zavatra voalohany hataontsika dia manao ny pom-pom. Misy fomba maro hanaovana pom-poms fa manoro hevitra anao izahay hanao izany amin'ny fork satria tena tsotra ary afaka manao pom-poms kely tsara ho an'ireo fotoana ireo ihany koa. Tsotra toy ny fanodinkodinana ny volon’ondry manodidina ny garpu, ny famatorana azy ary ny manapaka. Azonao jerena amin'ity rohy ity ny fomba fanaovana pom-poms amin'ny fork: Manamboatra pompon kely izahay amin'ny alàlan'ny fork
Horaisintsika izao ny baoritra na ny fingotra Eva izay nofidintsika. Hanao ny endriky ny satroka ririnina isika, araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Hotapahanay ny satrokay tsara mba ho marina ny endrika. Rehefa vita dia afaka mikitika isika raha toa ka misy tampony na faritra voatapaka ratsy.
Podemos manampy antsipiriany miaraka amin'ny loko raha tiantsika, toy ny teboka sasany, dian-kapoka na oram-panala, fa ity dingana ity dia azo atao tanteraka. Mba hanaovana izany dia afaka mampiasa marika maharitra na loko acrylic.
Hamita apetaho eo ambony ny pom-pom ny cap. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa tsara glued.
Ary vonona! Efa vita ny satrontsika ary vonona ny handravaka ny entantsika sy hanaitra ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Satroka pompom mora handravaka
Boaty surprise ho an'ny andron'ny mpifankatia
Asa tanana amin'ny bosoa atao amin'ny ankizy